Vanomirira Kodzero dzeVatori veNhau Voshushikana neMutemo Mutsva Wakasainwa naVaMnangagwa
Kubvumbi 09, 2021
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanonzi vakasaina kuti uve mutemo bhiri reZimbabwe Media Commssion (ZMC), iro rakanangana nekuvandudzwa kwemutemo weAccess to Information and Protection to Privacy Act, AIPPA.
Izvi zvakaziviswa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana kuburikidza nemashoko avakaisa padandemutande reTwitter, avo vakati vari kufadzwa zvikuru nekuvepo kwemutemo weZimbabwe Media Commssion Act uyu.
Asi mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa (MISA) Zimbabwe, VaTabani Moyo, vanoti kunyange hazvo bhiri iri rave mutemo, hauna zvinotarisirwa zvinobata kutongwa kwevatori venhau, izvo zvavanoti vanotarisira kuti zviri mune mubhiri risati rave mutemo re Media Practitioners Bill.
Asi VaMoyo vanoti mutemo weZimbabwe Media Commission Act uyu wadzosa nhaurwa dzinoita nezvekuti vashandise mapurisa mukubata vanenge vachifungirwa kuti vari kuvhiiringidza kodzero dzekutapwa kwenhau.
Ngatinzweyi hurukuro yavaita naJonga Kandemiiri weStudio7
Hurukuro naVaTabani Moyo